Jiirka sida xayawaanada - sidoo kale ku haboon carruurta dugsiga?
Hayso jiirka sida xayawaanka sida ugu haboon
Jiirka waa xayawaanka ugu fiican carruurta da'da iskuulka ah. Ma aha oo kaliya inay xiiseeyaan inay daawadaan, carruurtu waxay kaloo bartaan inay xayawaanka yaryar ku xakameeyaan isdhexgalka maalinlaha ah ee leh jiirka yaryar. Intaa waxaa dheer, jiir sida xayawaanku u baahan yahay fiiro maalmeed iyo, ka sarreeya, kala duwan.
Caruur iyo jiir sida xayawaanka raba
Jiirka waa xayawaan u baahan in si taxadar leh loo wajaho. Haddii ay dareemaan in ay aad u yar yihiin, waxay qaniinaan karaan.
Marka ay isdifaacaan, si dhakhso ah ayey hoos ugu dhacaan shoogga iyo khaladaadka khaldan, tusaale ahaan. Ku soo jiidista dabada waxay sababi kartaa dhaawac halis ah. Carruurta aadka u yar, jiirka jilicsani maaha mid ku haboon, sida carruurta leh dabeecad adag oo qotodheer.
Dhalashada da'da dugsiga hoose, caruurtu waxay leeyihiin karti ay ku qabtaan jiirka. Isla markaa, xiisaha xayawaannada aan caadiga ahayn ayaa kordhaya carruurta. Doofaarka iyo doofaarka guinea maaha mid ku siijeeda bartamaha xiisaha.
Jiirka ayaa u muuqda in uu noqonayo mid firfircoon, laakiin badanaa waxay la qabsadaan daryeel-bixiyahooda waxayna firfircoon yihiin gelinka dambe.
Sirdhankoodu waxay si gaar ah u xiiseeyaan carruurta. Qof kasta oo si joogto ah ula dhaqma xayawaanka, si dhakhso ah ayuu u dhaqso. Waxay jecelyihiin noocyo kala duwan, sidaas darteed milkiilayaashooda yaryar waxay u daadi karaan tamar marka ay dhisanyihiin qafiska. Dhamaan goobaha lagu ciyaaro waxaa lagu sameyn karaa tunnel, sanduuqyo leh godad iyo waraaqo waraaqo iyo waxyaabo kale. Iyada oo la adeegsanayo tababarka riixa, waxaad si fudud u baran kartaa khibradaha.
Habka saxda ah ee looga hortago jiirka
Gaar ahaan bilowga hore waa muhiim inaad la socoto carruurta xannaanada xoolaha. Waa inaad barataa inaad si toos ah u raacdo kursiga markaad si taxadar leh ugala hadasho xayawaanka.
Kuwa bilowga ah ee xoolaha, waxaa lagugula talinayaa inaad go'aamiso iibsashada horeba xayawaanka xayawaanka. Haddii aad runtii aad rabto inaad xayawaan aad u yar u baahato, waa inaad maalin kasta si aad ah ula macaamishaa, si ay dhab ahaantii u roonaadaan. Ragga waa caadi ahaan xoogaa xasiloon marka ay wax ka qabanayaan haweenka.
Sidoo kale, qaadidda waa in lagu dhaqmaa. Kaliya marka ilmuhu aad u degan yahay oo la xayawaanka xayawaanka ah ee aan ku sii deynin dhaqdhaqaaq kasta oo ka mid ah jiirarka shoogga, waxaa la joogaa waqtigii jimicsiga ka baxsanaa tuubada iyada oo aan la kormeerayn.
Ma samayso jiirka si farxad leh loogu qaado garbahooda iyagoo maraya waddooyinka. Waxay u muuqataa inay badanaa qabow u tahay carruurta waaweyn. Laakiin waa diiqadda kaliya ee xayawaanka.
Jiirka ayaa leh dabeecad gaar ah. Waxay runtii ku faraxsan yihiin sida xayawaanka baakadka, haddii lagu qabto ugu yaraan ilaa saddexaad. Nafaqada shakhsi ahaaneed waa xayawaan xayawaan ah. Xaqiiqda ah jiirka keliya ayaa rogrogaya marka ay keligood tagaan waa khalad caadi ah.
Xaji sida xayawaanka
Jiirka caqliga leh waxay u baahan yihiin meelo badan. Ugu fiican waa qafis weyn oo leh baararka toosan, sida aviary shimbir waaweyn. Tan waxaa loo qaabayn karaa sida loo rabo dabaqyada dhaadheer iyo fuulitaanka fursadaha. Iyada oo waalidku si farsamo loo xereeyey, xannaanadii hore ayaa lagu beddeli karaa meel cusub oo guriga ah.
Cuntada ayaa isku dhafan, sida jiirka waa omnivores. Cuntada ugu weyni waa raashin lagu dabaasho, isku darka feedka iyo miraha. Intaa waxaa dheer, xayawaanka yar yar waxay u baahan yihiin maalin kasta miraha iyo khudaarta cusub. Sida daaweyn u dhaxaysa jiiska, jinka, caanaha lo'da, buskudka eeyda iyo cayayaanka marmar ah, sida circa.
Jiirka oo lagu hayo xayawaan aan lahayn wax aan la samayn "jiirka bullaacadaha" ama jiirka madow. Waxay asal ahaan ka soo jeedaan jiirka tijaabada ah ee shaybaarada tijaabada xoolaha, laakiin tani macnaheedu maaha inay jiran yihiin.
Nasiib darro iyagu ma sii daayaan. Laba sano ayaa horay u jirey da 'wayn oo ah jiirka yar yar. Carruurtu way ka bartaan si aan macquul ahayn inay ugu dambeyntii leeyihiin inay raali ku noqdaan xayawaankooda. Dhinaca kale, midna kuma xirna jiirka muddo dheer, taas oo faa'iido u leh waalidiinta badan ee bisadaha iyo eyda.